ၦၥုၪ့ထၪ့ဂံၪ့နံၫဂၩ | Radio Veritas Asia
ၦလၧအစံၭယၧၩ, ကဆါဧ့,ကဆါဧ့နီၪ, မွဲအမိလ့ၩနုၬဘၪလၧမူၭခိၪအဘၩ့အမုးအဖၧၩ့ ကိၭဂၩဒ့ၭအ့ၬ. မွဲၦလၧအမၩဝ့ၫ ထီးဒၪယဖါအီၪလၧမူၭခိၪအၥၭနီၪလီၫ.- လၧမုလနံၩနီၪၦအၪဂၩမိစံၭယၧၩ,ကဆါဧ့, ကဆါဧ့, ပချဲၩ့ဆၧလၧမီၪအချိၬလၧနမံၩ့,ဒဲပနၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧနၪလၧနမံၩ့, ဒဲပမၩဆၧလၩ့လၭအၪမံၩ့ လၧနမံၩ့မွဲအ့ၬဧၪ.-
ထီးနီၪလဖၧၫ့ ယမိလီၩဘၪဆၧတီၩတီၩ, ယၥ့ၪယၫနၥံၪနးဆိၭအ့ၬ. ၦလၧအကိၪ့မၩဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ၥံၪဧ့, စဲၪ့ဖၭလၧယၧၩဆံၭ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ၦလၧအနါဂၧၫ့ယလူယီၩ ဒဲ ထီးန့ဝ့ၫကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ, ယမိဒီၩ့လၩ့အဝ့ၫၥံၪဘဲၫၦ ကိၪ့ဆၧၥ့ၪလၧအမၩဂံၪ့ လၧလိးခိၪလဂၩအၥိၭနီၪလီၫ.- ဆၧဂဲၫဆၧၩ့လၩ့တၭ,ထံၫဆ့ၭဆီၪ့,လံၩအူၪဝ့ၫ နီၪ,ဒဲလၩ့ဘၪဝ့ၫလၧဂံၪ့လဖျိၪ့နီၪ, လလၩ့ဎီးဘၪတၭ, မွဲအခၪ့ထံၭအီၪဝ့ၫလၧလိးခိၪအဂဲးလီၫ.-
ၦလၧအနါ ဂၧၫ့ယလူယထၫယီၩတၭ, လထီးန့ဘၪဝ့ၫကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ,ယမိဒီၩ့လၩ့အဝ့ၫၥံၪဘဲၫၦအဂီၩ့ လၧအမၩဂံၪ့လၧ မ့ၭခိၪလဂၩအၥိၭနီၪလီၫ.- ဆၧဂဲၫဆၧၩ့လၩ့တၭ, ထံၫဆ့ၭဆီၪ့,လံၩအူၪဝ့ၫနီၪ, ဒဲဘၪဂံၪ့လဖျိၪ့နီၪတၭ, လၩ့ဎီးဝ့ၫလီၫ. အဆၧလၩ့ဎီးနီၪနၭမၬလီၫ.
ဆၧမၩအၥၭထီး ယ့ၫရှူၬလီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧနီၪဂီၩ့တၭ, ၦခမျၧးထီၫမံၫထီၫမၪဝ့ၫ လၧအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အဂဲးလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲအၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ဆၧ ဘဲၫၦကွ့ၭလံၬအၥိၭအ့ၬ. မွဲဘဲၫၦအီၪလၧအစီၩ့အမၩ့ လဂၩအၥိၭနီၪလီၫ.